Kumutungamiriri. Rwiyo rwevanakomana vaKora.+ 49 Inzwai izvi, imi marudzi. Nyatsoteererai, imi mese vagari vepanyika, 2 Mese vakuru nevadiki,Vapfumi nevarombo. 3 Muromo wangu uchataura zveuchenjeri,Uye zvandinofungisisa mumwoyo wangu+ zvicharatidza kunzwisisa. 4 Ndichanyatsoteerera chirevo;Ndichatsanangura chirahwe changu nerudimbwa. 5 Nei ndichifanira kutya munguva dzematambudziko,+Pandinenge ndakakombwa nezvakaipa* zvevaya vari kuedza kundiwisira pasi? 6 Vaya vari kuvimba nepfuma yavo+Uye vanozvirumbidza pamusoro peupfumi hwavo hwakawanda,+ 7 Hapana kana mumwe chete wavo anogona kudzikinura hama yakeKana kupa Mwari rudzikinuro nekuda kwake,+ 8 (Mutengo wekudzikinura upenyu hwavo* unokosha kwazvoZvekuti havambofa vakaukwanisa); 9 Kuti ararame nekusingaperi, orega kuona gomba.*+ 10 Anoona kuti kunyange vanhu vakachenjera vanofa;Benzi uye munhu asingafungi vanoparara pamwe chete,+Uye vanofanira kusiyira vamwe pfuma yavo.+ 11 Chido chavo ndechekuti dzimba dzavo dzigare nekusingaperi,Matende avo agare kwezvizvarwa nezvizvarwa. Vakatumidza nzvimbo dzavo mazita avo. 12 Asi munhu, kunyange achikudzwa, haarambi aripo;+Hapana paanopfuura mhuka dzinoparara.+ 13 Iyi ndiyo nzira yemapenzi+Neyevaya vanovatevera, vanofarira mashoko avo asina maturo. (Sera) 14 Vanoendeswa kuGuva* semakwai ari kunourayiwa. Rufu ruchavafudza;Vakarurama vachavatonga+ mangwanani. Vachanyangarika;+Guva richava*+ imba yavo panzvimbo pekugara mudzimba dzemaoresa.+ 15 Asi Mwari achandidzikinura* pasimba reGuva,*+Nekuti achandibata neruoko rwake. (Sera) 16 Usatya mumwe munhu nekuti ava mupfumi,Kukudzwa kweimba yake kwawedzera, 17 Nekuti paanofa hapana chaanokwanisa kuenda nacho;+Kukudzwa kwake hakuendi naye.+ 18 Nekuti paanenge ari mupenyu anozvirumbidza.*+ (Vanhu vanokukudza paunobudirira.)+ 19 Asi anozopedzisira abatana nechizvarwa chemadzitateguru ake. Havazomboonizve chiedza. 20 Munhu asinganzwisisi izvi, kunyange achikudzwa,+Hapana paanopfuura mhuka dzinoparara.
^ ChiHeb., “nezvitadzo.”
^ Kana kuti “guva.”
^ Kana kuti “Sheori ichava.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “achadzikinura mweya wangu.”
^ Kana kuti “paruoko rweSheori.” Ona Tsanangudzo Yemashoko.
^ Kana kuti “anorumbidza mweya wake.”